विदेशको पीडामा लेखिएको गीत ‘परदेशीको खबर’ (भिडियो सहित) – ABC KHABAR
विदेशको पीडामा लेखिएको गीत ‘परदेशीको खबर’ (भिडियो सहित)
May 31, 2016 May 31, 2016 ABC Khabar कला
काठमाडौं, १८ जेठ । ‘परदेशीको खबर सुनाइदिनु राम्रै छ भनेर, मनको साथी मुटुमा राखी बाँच्दैछु सम्झेर’ गीतकार भूपेन्द्रजंग राईको शब्दमा सजिएको गीत ‘परदेशीको खबर’ बजारमा आएको छ । वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा मकाउमा रहेका गीतकार भूपेन्द्रले आफ्नो परिवेशमा लेखेका गीत हो । उनको भोगाइले उनलाई गीतकारको लाममा उभिन बाध्य पारेको बताउँछन् ।
उनले विगत सम्झँदै भन्छन, ‘एकसमय यस्तो थियो जुनबेला गाउँमा छोरी मान्छेले हलो जोत्न हुँदैन । घरको धुरी चढ्नु हुँदैन । बाहिर बोल्दा जोगिनु पर्छ । स्कुल पढे बोक्सी हुन्छ ।’ यस्तै सुनेका भूपेन्द्रलाई जब वैदेशिक रोजगारमा मकाउमा पुगे त्यहाँ उनले सुनेको समाज थिएन । त्यहाँ न छोरी, न छोरा काममा कुनै भेदभाव देखेनन् । उसो त्योभन्दा अगाडि अफ्गानिस्थान ५ बर्ष बस्दासमेत उनलाई यो विषयमा राम्रै अनुभूति भएको थियो । यसले भूपेन्द्रलाई निकै आनन्दित पनि बनाएको थियो ।
तर, उनले त्यहाँ पुरुषसरह नेपालबाट सबै काम गर्ने हिम्मतका साथ छोरीमान्छेहरूसमेत धमाधम वैदेशिक रोजगारमा आएकाहरू विदेशमै देखे उनलाई थप पीडाले पोल्न थाल्यो । उनले भेटेका महिलाहरू धेरै विवाहित थिए । छोराछोरीको पढाइ खर्चलगायत परिवारको व्यवस्थापन जोहो गर्न आएको उनले जब जानकारी पाए अनि उनको मनले भावना ओकल्यो ‘परदेशीको खबर’ ।
खोटाङ जिल्लाको साउनेचौरमा जन्मेका उनी सानै उमेरदेखि गीत कविता कोर्न रुचाउने मान्छे । जीवनका हरेक हन्डर र ठक्करहरू खाएर वैदेशिक रोजगारमा विगत १० वर्ष यता निरन्तर रहेका छन् उनी । उनले भोगेको पीडा, देखेको संसार र मनमा उब्जेका भावनाको समिश्रण गरेर उनले लेखेको गीत हो ‘परदेशीको खबर’ जुन उनको सन्देश एल्बममा रहने भएको छ । उनले आफूले भोगेको मनोदशालाई गीतमा सविस्तार गरेका छन् ।
भावनामा नेपाल र भौतिक शरीर श्रमका लागि समर्पित बिरानो मुलुकमा बचाएर राखेको कठोर आत्मिक अभिव्यक्ति रहेको छ गीतकार भूपेन्द्रको गीतको शब्दमा । माया र प्रेममा रंग होला तर निश्चल सन्तानको माया र आफ्ना लालाबालाका लागि विदेशिएका ती महिला दिदी बहिनीहरूका लागि समर्पित छ उनको गीत । उनले मकाउबाट फोन मार्फत सुनाउँछन् । ‘दिन बित्दैछ पसिना घामले रातभरी घरको याद, खाए खाएनन? बचेरा ज्यानले खुसीको दाल र भात’ भक्कानिएको भावमा गीतको शब्द सुनाउँदै उनले गीतकै भाषामा भने, ‘उनैलाइ खुसी दिउँकी भनी आए घर छोडेर, मनको साथी मनमा राखी बाँच्दैछु सम्झेर ।’
उनको यो शब्द यथार्थताको नजिक रहेको यसै गीतका संगीतकार डाक्टर किरातले सुनाए । हतपति यस्तो गीतहरू आउन छाडेको भन्दै उनले भने, ‘यस्तो गीतले आत्मा बोलेको हुन्छ, को रुँदैन होला त्यो पीडाले विदेशमा ।’ विदेश कोही पनि रहरले जाँदैनन् । उनले भने, ‘मैले संगीत गरिरहँदा म आफैँ भावनामा डुबेको छु । बचेरा ज्यानको माया, जो एकछिन छाड्दा जति हुन्छ । अझ विदेशमा ! त्यो आमाहरूलाई कस्तो होला ? म धेरैपटक कल्पिएँ शब्दले ।’ यसो त गीतको शब्दभाव जस्तै गायिका शिला राई पनि उत्तिकै मिहिनेतका साथ स्वर दिएकी छन् । उनले गाएको गीतहरू जति गाए पनि यो निकै राम्रो लागेको उनले बताइन् । ‘गीत र संगीतमा जीवन त हुन्छ नै तर यो गीतमा भएको जीवन साँच्चैको जीवनता छ ’ उनले सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘गीतमा भने जस्तै ः जुर्ने हो कहिले मायालाई भेट्न फर्की आउ उडेर, मनको साथी मुटुमा राखी बाँच्दैछु सम्झेर । यसले एउटा परदेशीको जीवन भोगाइलाई छर्लंग बनाएको छ ।’
पछिल्लो समयमा चर्चामा रहेकी शिलाले लगातार एकपछि अर्को गीतमा उस्तै स्वरहरू दिइरहेकी छन् । उनको स्वरमा अर्को पूर्वेली लोक संस्कृतिमा आधारित रेकर्ड भइसकेको छ । भने चाँडै रेकर्डिङको लाइनमा अर्को गीत रहेको उनले जानकारी दिएकी छन् । उनको मुटुभरी, थुन्सेको भारी बिसाउँदैलगायत गीत बजारमा निकै चलेका गीतहरू रहेका छन् । कस्तोमन, प्रेम नामक एल्वम बजार ल्याई सकेकी उनको जादुमयी स्वरले अझै गीतको उचाई बढाएको दर्शक तथा श्रोताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने पाउने संगीतकार डाक्टर किराँतको भनाइ रहेको छ । गीतलाई काठमाडौंका भेनस रेर्कडिङ स्टुडियोमा विक्रम कार्कीले रेकर्ड तथा सम्पादन गरेका हुन् ।
उन्नत बिउ बिजनका १७ करोड खर्च
रमितेबाट विजुली निस्कने